सके सहयोग गर्नुहोस नसके एक सेयर गर्नुहोस ,अ’ज्ञात समुहको कु’ट’पिटवाट घा’इते भएका सुरेशलाई बचाइदिन बुबाआमाको अनुरोध – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ १९, २०७८ समय: ०:४८:१३
अ’ज्ञात समुहको कु’ट’पिट वाट प्युठान न.पा. १० पातिहाल्ना कोटका सुरेश वस्नेत घा’इते भएका छन् । भने नरेन्द्र पुनको घ’टना स्थलमा नै मृ’त्यु भयो । अ’ज्ञात समूहका व्यक्तिहरुले कु’टपि’टमा गरि फालिएपछि उनि वाटोमा अ’चेत अवस्थामा फे’ला परेका थिए। वस्नेतलाइ उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल विजुवार लगिएता पनि उनको उपचार त्यहाँ सम्भब नहुदा थप उपचारको लागि बस्नेतलाई भैरहवा मेडिकल कलेज भैरहवामा लागिएको छ ।
अहिले उनको भैरहवा मेडिल कलेजको आइसियु कोठा नं ७ मा उपचार भइरहेको छ । सुरेशको टा’उकोको अ’प्रे’सन पनि सफल रुपमा भयो। तर उनको अवस्था भने ज’टिल रहेको भैरहवा मेडिकल कलेजले जानकारी दिएको छ । वस्नेतको उपचारको लागि ४ लाख भन्दा वढि रकम खर्च भइसकेको छ । उनको उपचार गर्नको लागि अस्पतालले दैनिक ३० हजार भन्दा बढी रकम लिएर उनको उपचार गरिरहेको छ ।
आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सुरेशका परिवारले अहिले सम्म जासोतसो अस्पताललाइ रकम बुझाएपनि अव भने उनको परिवारलाइ गाह्रो हुन् थालेको छ । सास रहदा सम्म वाच्ने आशा सवैको हुन्छ, अहिले सुरेशको उपचारको लागि परिवारले पर्याप्त मात्रा रकम उपल्वध गराउन धौ’धौ भएपछि सहयोग गर्न सवैलाइ आग्रह गरेका छन । दैनिकी गरेर विहान वेलुका छाक टार्ने यस परिवारलाइ दैनिक ३५ देखी ४० हजार सम्म रकम जु’टाउन मु’स्किल परेको छ ।
तर पनि सास रहदा सम्म परिवारले छोराको उपचारमा भने निरन्तर रुपमा गराउदै आएका छन । घरमा कमाउने मान्छे कोहि नहुदा उनको उपचारको लागी पैसा नभएपछि सहयोगको अपिल गरेका छन्। सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुका लागि ओम वहादुर घर्ती मगरको खाता न. ०५२००१०६७०४२१९०००००२ मा सकेको रकम उपल्व्ध गराइ सुरेशको ज्यान वचाइदिनुहुुन परिवारले अनुरोध गरेको छ । साथै नेपाल बैंक लि. खलङा प्युठान मा सकेको रकम जम्मा गरिदिनु हुन समेत परिवारजनले अनुरोध गरेका छन ।
Last Updated on: July 3rd, 2021 at 12:48 am